Xildhibaan Jindi: Dal dhan iyo ummad dhan malagu dhaqi karaa been, booto iyo igu sawir? – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirsaaq Jindi, oo ka tirsan Xubnaha Golaha Shacabka, ayaa ku dhaliilay Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo xukumaddiisa iney doonayaan in, sida uu hadalka u dhigay, ay been, booto iyo igu sawir ku maamulaan dalka, isaga oo taas wax lala yaabo ku tilmaamay.
Su’aal ahayd “dal dhan iyo ummad dhan malagu dhaqi karaa been, booto iyo igu sawir”? ayuu ciwaan uga dhigay dhigaal uu kusoo daabacay Xisaabtiisa Feysbuugga. Waxa uu xusay socdaalkii dhulka ahaa ee uu Madaxweyne Farmaajo ku soo maray Puntland iyo Galmudug, laakiin waxa uu isweydiiyey meesha uu Madaxweynuhu ka bixiyey balan-qaadyadii uu u soo sameeyey shacabka iyo maamulada goboladaas.
“Wuxuu soo dhagax dhigay mashaariic aad u tira badan, laguna farxay markii uu dhagax dhigayay, laakin nasiib darro ma jiro hal mashruuc oo ilaa hadda la bilaabay” ayuu Xildhibaan Jindi ku yiri dhigaalkiisa. “Macnaheeda waa maxaay” su’aal ahaydna waa uu sii raaciyey hadalkiisa.
Xildhibaanku waxa uu Madaxweynaha ku dhaliilay in hab-dhaqankiisa siyaasadeed ay ugula muuqato sida inuusan dooneen inuu dib u hogaamiyo Soomaaliya mar kale, marka uu waqtigaasa ka dhamaado 2020-ka. “Mudane madaxweyne sida kaa muuqato raja kama qabtid in aad dib dambe isu soo sharaxdid, ee waxaan ku dhihi lahaa, fadlan, ummadda Soomaaliyeed u nax, nidaamkana wax ka badal” ayuu yiri Jindi.
Hadalkiisa Xildhibaanka waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay shacab fara badan dowladda ku dhaliilayeen saacadihii ugu dambeeyey, kuwaas oo kahsaday qaraxyada iyo weerarada culculus ee ay Al-Shabaab markey rabaan ka geystaan Muqdisho, gaar ahaan meelaha ay xukumaddu aad u ilaaliso, kadib markii uu weerar qaatay habeen iyo maalin ka dhacay Muqdisho Khamiistii ilaa Jimcihii, kaas oo ay ugu yaraan 25 ku dhinteen 100 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhigaalka Xildhibaan Jindi ee sheekada kore
Reysal Wasaare Kheyre: Shacabku kama noqon karaan dhex-dhexaad Dowladda iyo Al-Shabaab